Ụbọchị My Pet » 5 Ihe a Wingwoman ka Cheta
emelitere ikpeazụ: Jul. 05 2020 | 3 min agụ
N'ịbụ onye wingwoman bụ ihe dị mkpa ọrụ! I nwere iji hụ na ị na-iwuli elu obi ike na-atụtụ iberibe nile na otu laa. Ma nke ahụ bụ ihe a na enyi bụ n'ihi na Olileanya ha ga-eme otu ihe ahụ ma ọ bụrụ na na mgbe akpọ ụkwụ bụ nke ọzọ ụkwụ. M na-etinye ọnụ Atụmatụ ma m na-eche ọ bụla wingwoman uru ya nnu maara na e nwere ihe a zillion ọzọ. Na a ụzọ m na-eche ọ bụla wingwoman maara na anyị na-amụ ihe mgbe nile na ọrụ – na ọbụna e ugwo!
obi ike Building
Enyi gị na-aga izute ụfọdụ egwu n'ụzọ. O di nwute na nke ahụ bụ ndụ. Ma mgbe i nwere ike ime ihe ọ bụla banyere na ị ga na-anọ n'ebe ahụ na ịgbawa oghe na Ben & Jerry na mgbe na dị nnọọ adị n'ebe ha. Gbaa mbọ hụ na ha maara na ha mere ihe ọjọọ ọ bụla nakwa na ha ga-ahụ onye ruru eru ha n'ọdịnihu. O doro anya na ọ bụrụ na ha asịwo a otutu obi ọjọọ ihe ndị dị okpukpu-elu ị ga-eleghị anya ga-aga site na ụfọdụ n'ime ndị a n'ụzọ zuru ezu ma ọ bụ nanị ntị. N'ihi na ha na a na-afụ ụfụ ha ga-mkpa iji nweta na si na ha usoro. Oh na anya ya na-adịghị mma banyere ex!
Gbaa mbọ hụ Ha Nchekwa
Echetara m otu mgbe ọ nụrụ otu ìgwè nke ndị enyi na-ekwu okwu na-anụ otu nwa agbọghọ na-ekwu banyere aga n'ụlọ na a Ihọd na bụ a bit creepy abalị tupu. Ekele ọ na naa ma ọ otụhọde a bit si na ulo-ya na-esote ụbọchị. My ntabi mmeghachi omume bụ ya mere na ọ bụghị otu n'ime ha na-aga na ya ma ọ bụrụ na ọ bụ a bit creepy ọ bụrụ na ha ndị kwesịrị ịbụ enyi ya? Echere m na ọ pụrụ ịbụ a bit siri ike n'ihi na ọ bụ ike ka onwe gị n'ime a Ihọd n'ulo ọ bụrụ na ị a kpọrọ ma m na-eche onwe m ma m chere na m ma ọ bụ nwunye na-aga n'ụlọ na a creep na m ga na-agbalị m hardest ọbụna ma ọ bụrụ na ha chere m na ewere inwe na na-ehi ụra na sofa! Na-esighị m na m eme ka n'aka na-na ekwentị ha ahụ ma ọ bụrụ na ha bụ ndị na naa. O doro anya na ịtụ egwu bụ na ị pụrụ iche na ị ga-abịa gafee n'elu-echebe ma m na-eche na n'ikpeazụ a enyi ga-maara na ị na-eme ya n'ihi na ha na nchekwa. Na ọ bụ dị nnọọ mma karịa ndị ọzọ ihe nwere ike ime ka enyi gị na ihe n'ụzọ dị mwute mere mgbe ọ.
Inwe mkpa On guzo n'akụkụ
Na nke ahụ dị arọ bit mere na aga na akụkụ. Ugbu a na na fun stof! Ọ bụla wingwoman maara na ị ga-mkpa gị ọkọnọ nke anam-elu, ntutu brushes, combs, wdg … on nguzo-site. Otú ahụ ma ọ bụrụ na ma nke unu na-ahụ onye na-amasị gị ị nwere ike ma òkè ọ bụla ọzọ na ihe ndị ọzọ nwere ike chefuo e wee hụ a knockout na-adọta mmasị na pụrụ iche na mmadụ.
Ana m ekwu na i kwesịrị ịna-Oscar-eru ma ọ bụ ihe ọ bụla nke dị. M pụrụ isi mee ka buttons ma ka oge na-ị ga-amụta na-eme ihe na ị nwere mmasị mgbe ị bụghị karịsịa. The ihe banyere ndị mmadụ mgbe ha na-amasị onye (Na ọ dịghị onye n'ime anyị pụrụ diss onye ọ bụla n'ihi na anyị niile nọ ebe ahụ!) bụ na ha na-ekwurịta banyere ha nke ukwuu. Na ị na-agaghị aga na-nnọọ mmasị na ihe niile ha na-ekwu mgbe niile ma n'ihi na ọtụtụ akụkụ ị dị nnọọ mkpa ọchị ma na interject na okwu dị ka “N'Ezie?”, “Oh jụụ.”, “Yeah, otú ihunanya” na ị ga-abụ ezi. Ha bụ nnọọ mmasị ekwu okwu banyere onye ha ga-ọbụna hụrụ.
-Abụ ruo Kọọrọ
Ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ ma ọ bụ ihe ọ bụla na oge nke ahụ bụ dị iche iche. Ma ọ bụrụ na ọ bụ ihe ahụ ị na-eme nke nwere ike na-eche mgbe niile na-etinye enyi gị mbụ ma ọ bụrụ na ha na-enwe isi nke na ha mkpa agwa gị okwu banyere. Ọ bụrụ na ha na-eme ya mgbe niile na ị nwere ike ghara inwe ihe ọ bụla mere ma ọ bụ na ha agaghị eme otú ahụ n'ihi unu nakwa pụrụ ịdị gị mkpa echegharị echiche na ma ọ bụrụ na i nwere a mma-ahụ maka ha, ele anya maka ha ma ị nwere ike n'ezie ime ihe ọ bụla karịrị nke ahụ dị ka ezi wingwoman ma ọ bụ enyi.
Olee otú Nọgidenụ a Imezu Mmekọrịta